Anyị anwalela otu UI 3.0 na ndị a bụ ozi ya kachasị mma | Gam akporosis
[Na vidiyo] Anyị nwalere otu UI 3.0 na Galaxy Note10 +: ya kacha mma ozi ọma
Anyị nwere emelitere ụbọchị ole na ole gara aga na One UI 3.0 ma anyị na-ezi gị na vidiyo kacha mma ozi ọma banyere gam akporo 11 na Galaxy Note10 +. Mmelite ọhụrụ na ọ bụrụ na mmadụ esite na 2.5 nke Otu UI apụtaghị nnukwu ọganihu, mana ọ nwere nkọwa na ozi ndị ahụ masịrị.
N'ime akwụkwọ akụkọ ndị a anyị nwere ike ekwu okwu banyere ngwa ngwa ngwa wijetị, ọkwa afụ Iji jiri WhatsApp na ngwa ngwa izi ozi ndị ọzọ ma ọ bụ okpukpu abụọ gbanyụọ ihuenyo ekwentị. Gaa maka ya.
1 Ọkwa ka mma ma na-ese n’elu mmiri
2 Nweta ngwa ngwa wijetị
3 Mgbe niile na Ngosipụta ngosi
4 Samsung n'efu
5 Nhazi ohuru maka njikwa olu
6 Obere akụkọ abụọ, mana ọ dị mkpa
Ọkwa ka mma ma na-ese n’elu mmiri
Anyị kwurịtara ụnyaahụ na vidiyo ọhụrụ sitere na ọwa YouTube anyị Androidsis ihe bụ ọkwa afụ na otu esi arụ ọrụ ha na WhatsApp, ebe ọ bụ na ngwa a Ha anaghị akwado ndabara ka ọ na-eme na Telegram na ngwa izipu ozi ndị ọzọ.
Notfọdụ ificationsma Ọkwa nke egosipụta na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka nkata isi ma ọ bụ sere n'elu Facebook ozi egosipụta. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịnwe na ngwa ọzọ na mkpanaka anyị iji pịa na nkwupụta afụ ahụ wee nweta nkata na ndị ọrụ ibe.
Ihe ohuru nke ndia ma Ọkwa bụ a mma kesaa obubọk na na-etinye na ngwoolu na ndị chat ozi na anyị na-anata. Karịsịa ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịza site na otu panel na-enweghị imeghe ngwa ahụ, yabụ gam akporo 11 ka mma na-ejikwa ọkwa ndị ahụ niile maka ọpụpụ dị ịrịba ama karị na ahụmịhe onye ọrụ.
Nweta ngwa ngwa wijetị
Ihe ọzọ na-atọ ụtọ nke One UI 3.0 bụ ngwa ngwa ngwa wijetị site na ime ogologo pịa n'otu shortzọ mkpirisi site n'ụlọ. N'ụzọ dị otú a, a na-emepụta obere windo ahụ nke na-enye anyị ohere ịnweta wijetị na-arụ ọrụ maka ngwa ahụ wee si otú a họrọ ha ọzọ site na iji ogologo pịa iji were ya na desktọọpụ ahụ.
Mgbe niile na Ngosipụta ngosi
Enwere otutu akwukwo ohuru nke gosiputara na mgbe nile. wijetị ndị elekere na ndị ọzọ na-arụ ọrụ mgbe ihuenyo bụ na-ekwe ka anyị mara ma ọ bụrụ na arrivema Ọkwa na-abata na-enweghị ịmeghe mobile.
N'ime wijetị ndị ahụ, ụfọdụ ka mma, anyị na-eme pụta ìhè ọhụrụ Digital Health iji mara ozugbo oge anyị na-eri na dị iche iche ngwa. Anyị na-pịa na elekere, anyị na-eme a ala ogbugbu na ndị niile na-arụ ọrụ wijetị na-egosi.
Ọzọkwa ha anọwo na mma ike na akwụkwọ ahụ aja na Kpọghe ihuenyo eji uzo ohuru ma nwee obi uto na oghere a nke anyi puru iji kasi onwe anyi obi tupu anyi agaa oche.
Ma obu gini bu Samsung Daily nwere na a ogbugbu si desktọọpụ ohere a na ndepụta nke ọrụ anyị na-ahazi na mbụ. Dị ka Google, nke bụ nke malitere ọrụ a na Pixels ya, anyị nwere ike ịnweta ozi ndị ahụ niile, isiokwu ndị nwere mmasị na isiokwu anyị masịrị site na ngosipụta ngwa ngwa.
Nhazi ohuru maka njikwa olu
Ee ee, Samsung emeela onwe ya karịa oge a wetara anyị ọhụụ ọhụrụ maka njikwa olu oro eyenem ediwak owo esịt. Naanị anyị na-pịa olu na ogwe ahụ kwụ ọtọ na-egosi na ọ na-enyefe otu akụkụ dum nke abawanye ogo iji belata ma ọ bụ mụbaa mgbasa ozi, ọkwa, oku na ndị ọzọ.
Obere akụkọ abụọ, mana ọ dị mkpa
Nke mbu bu otu a na-akatọ ya n'ihu ọha na ọ bụ eziokwu na e belatalarị grid ahụ nchekwa na 4 × 3. Nke na-ahapụ anyị ntakịrị oyi site na ịnwe taabụ dị iche iche mgbe anyị mepere folda na desktọọpụ.
Ihe ọ hụrụ n'anya nke ukwuu bụ Pịa ugboro abụọ iji gbanyụọ ihuenyo site na desktọọpụ nakwa na anyị echeela ogologo oge na ekwentị Samsung ndị a.
Otú ahụ ka ọ dị ozi kacha mma nke Otu UI 3.0 nke na-abụghị nnukwu nzọụkwụ site na Otu UI 2.5, na ị nwere ike ịma nkọwa ya niile na vidiyo site na ebe a, ma ọ na-etinye mmetụ aka na ahụmịhe nke ọhụụ na mmekọrịta ka mma, akwụkwọ akụkọ ọhụụ dị ka ọkwa afụ ma ọ bụ nhazi njikwa olu ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » [Na vidiyo] Anyị nwalere otu UI 3.0 na Galaxy Note10 +: ya kacha mma ozi ọma
Otu nke isii bụ RTS ọgụ na-enweghị ikuku ikuku na akụkọ ifo Cannon Fodder
Anyị na-enyocha Moto One 5G Ace ọhụrụ